Sizoba yini isimo sokuthunyelwa kwendwangu nezingubo engxenyeni yesibili yonyaka?
Ukuhweba ngezindwangu nezingubo kwaseChina bekungajwayelekile engxenyeni yokuqala yalo nyaka ngenxa yokusabalala komhlaba wonke kwe-COVID-19. Kufakwa ngoMeyi nangoJuni, eminye imininingwane ithathiwe. Isimo sonke engxenyeni yesibili yonyaka siyinkimbinkimbi futhi siyashintsha, futhi kusadingeka sisinake kakhulu. A ...
Isidlo sakusihlwa sabasebenzi ngaphambi koMkhosi Wentwasahlobo ka-2020, konga amandla ukudala unyaka olandelayo wokuvuna omkhulu!
Ekupheleni kuka-2019, sizofingqa umsebenzi wangonyaka odlule, ngokugxila ngokukhethekile ezinkingeni emsebenzini, futhi sivumele wonke umuntu akhumbule ukwenza umsebenzi ongcono kuNyaka Omusha. abasebenzi, umphathi wokukhiqiza, ukuthenga, i-QC, i-accountant, ama-sa amane ...
Umbukiso Womlingo NgoFebhuwari 2020
Sizoya eMBONISWENI WEMAGICI NGOFebhuwari 2020, Hlala ubheke izindaba zethu zakamuva.
Lo mbukiso ubanjelwe eMoscow, eRussia kanti amanye amazwe aseduze kuyimakethe yethu yokuqala.Sinamakhasimende amaningi asebenze nathi iminyaka engaphezu kwengu-10 Ngokuqaliswa kwenqubomgomo ye-One Belt And One Road eChina, sine silethe imikhiqizo ekhethekile yemar Russian ...
Sizohambela i-International Sourcing Expo Australia ngomhlaka 20-22 Nov, 2018 eMelbourne. Idokodo lethu Cha lingu-V27. Wamukelekile ukuvakashela idokodo lethu ngemiklamo emisha. Ngibheke phambili ukuhlangana nawe lapho. Lesi yisikhathi sethu sokuqala ukuya embukisweni waseMelbourne, abathengi embukisweni ...
Umlingo Show 2018
Sizohlangana kuMlingo Show eLas Vegas ngomhlaka 11-14 Feb, 2018. Idokodo lethu cha lingu-63217-63218. Wamukelekile ukuvakashela idokodo lethu futhi uhlole umklamo wethu omusha. Ngibheke phambili ukuhlangana nawe. Lesi yisikhathi sethu sesine ukuhambela lo mbukiso, lapho sisungule futhi sagcina ukubambisana nabathize ...